IiVenkile ze-Engenia- Ilungelo laseMelika lokwazi
EPA oobhontsi bempumlo ngokomyalelo wenkundla, uthi amafama asengayisebenzisa i-dicamba herbicides engekho mthethweni
ezaposwa ngomhla Juni 9, 2020 by UCarey Gillam
(IINKCUKACHA ngezimvo ezivela kwi-BASF)
I-Arhente yoKhuseleko lwezeNdalo ngoMvulo wathi ngekhe usihloniphe kwangoko isigwebo senkundla esikhutshwe kwiveki ephelileyo esithi kuthintelwe ukubulala ukhula okwenziwe ziinkampani ezintathu ezinkulu zemichiza emhlabeni.
Ukuhamba kwe-EPA kufana nesipho esivulekileyo kwi-BASF, Bayer naseCorteva Agrisciences ezinama-dicamba herbicides abonwa njengenkundla ukuba yamkelwe yi-EPA ngokungekho mthethweni. Inkundla ithe ngqo ngolungelelwano ikhutshwe kwiveki ephelileyo ukuba ayifuni kulibaziseka ukuphuma kwezi zicelo. Inkundla icaphule umonakalo owenziwe kukusetyenziswa kwe-dicamba kwihlobo elidlulileyo kwizigidi zeehektare zezityalo, iziqhamo kunye nemifuno kwilizwe laseFama.
Kodwa i-EPA ibhengeze uMvulo ukuba ikhupha "umyalelo wokurhoxisa" oza kunika amafama kude kube nguJulayi 31 ukuba asebenzise isitokhwe esele sikhona seBayer Xtendimax, i-Engenia ye-BASF, kunye ne-FeXapan yaseCorteva.
Isigwebo seNkundla yeziBheno yase-US kwiSekethe yesithoba safumanisa ukuba i-EPA yenza iimpazamo ezininzi ekuvumeni iimveliso ze-dicamba kwaye yaphendula kwisikhalazo esiziswe yiNational Family Farm Coalition, iZiko loKhuseleko lokutya, iZiko lokwahlukahlukana kwezinto eziphilayo, kunye Inethiwekhi yokuSebenza ngezibulala-zinambuzane eMntla Melika.
Iziko loKhuseleko loKutya (i-CFS), elinamagqwetha aphikisanayo nabaceli, bathi kwingxelo yokuba isenzo se-EPA "asinasihlahla" kwaye "siyabutyeshela ubungqina obubhalwe kakuhle noboyikekayo bokulimala okukhulu kumafama avela kwelinye ixesha lokutshiza eliyingozi. . ” Isenzo se-EPA sikwabutyeshela ubungozi be-dicamba kumakhulu ezilwanyana ezisengozini, utshilo uCFS.
“Ulawulo lukaTrump luyaphinda lubonakalise ukuba aluqwalaseli mthetho. Bonke abasebenzisi abaqhubeka bengafuni ezinye iindlela kufuneka babone ukuba basebenzisa imveliso eyingozi, enesiphene, kunye nemveliso engekho mthethweni. Siza kuzisa ukungaphumeleli kwe-EPA ukuthobela umyalelo weNkundla kwiNkundla ngokukhawuleza okukhulu, ”utshilo uCFS.
Unobhala wezoLimo e-US u-Sonny Perdue kwiveki ephelileyo ukhuthaze i-EPA ukuba icinge indlela ejikeleze isigwebo senkundla, evakalisa izimvo zika-Bayer, BASF kunye no-Corteva ezibiza i-dicamba herbicides ebalulekileyo "izixhobo" zamafama akhulisa iimbotyi zesoya kunye nomqhaphu.
I-EPA ithe ngokuthatha isigqibo sokuvumela amafama ukuba aqhubeke nokusebenzisa i-dicamba ukuphela kukaJulayi yayiphendula "iifowuni ezininzi ezingacelwanga kunye ne-imeyile" exelela iarhente "kukho inkxalabo yokwenyani kunye nokubakho kokutshatyalaliswa kwezityalo zomqhaphu nezesoya ezinokuthi kukhokelela kwintlekele kushishino. ”
I-EPA ayikhange iwamkele amanqaku amafama akhula ngaphandle kwezityalo ngaphandle kweembotyi zesoya ezinyamezelayo kunye nekotoni abaye balahlekelwa sisityalo kwi-dicamba drift kwaye boyika elinye ihlobo lokonakaliswa kwesityalo.
Amafama ebesebenzisa iyeza lokubulala ukhula ngaphezulu kweminyaka engama-50 kodwa ngokwesiko kuthintelwe ukufaka iyeza lokutshabalalisa ukhula kwiinyanga ezishushu zasehlotyeni, kwaye kunqabile ukuba kunokubakho kumhlaba omkhulu ngenxa yokuxhaphaka okwaziwayo kwemichiza ukukhukuliseka kude neendawo ekujoliswe kuzo ezinokonakalisa izityalo, iigadi, izitiya, namatyholo.
IMonsanto, eyayithengwe yiBayer kwi2018, yawuphakamisa lo mqobo xa yasungula imbewu yeembotyi zesoya kunye nembewu yomqhaphu kwiminyaka embalwa edlulileyo, ikhuthaza amafama ukuba atshize imixube emitsha yedicamba “ngaphezulu” kwezi zityalo zenziwe ngemfuza ngexesha lokushisa kwemozulu iinyanga ezikhulayo.
Intshukumo kaMonsanto yokudala izityalo ezinganyamezelekiyo ze-dicamba yeza emva kwesityalo esinganyamezelekiyo se-glyphosate kunye nokutshiza okuxhaphakileyo kwe-glyphosate kudala ubhubhane wokumelana nokhula kwilizwe lonke lasefama lase-US.
Amafama, izazinzulu zezolimo kunye nezinye iingcali zalumkisa uMonsanto kunye ne-EPA ukuba ukuzisa inkqubo yokunyamezela i-dicamba ayizukudala kuphela ukuxhathisa i-herbicide kodwa iya kukhokelela kumonakalo owonakalisayo kwizityalo ezingezonjongo zemfuza ukunyamezela i-dicamba.
Iinkampani zibanga ukuba iinguqulelo zabo ezintsha ze-dicamba azizukuhamba kwaye zihambe njengoko iinguqulelo ezindala zemveliso yokubulala ukhula ye-dicamba zaziwa ukuba ziyazenza. Kodwa ezo ziqinisekiso zibonakaliswe zibubuxoki phakathi kwezikhalazo ezibanzi zomonakalo we-dicamba drift kule minyaka idlulileyo. Ngaphezulu kwesigidi esinye seehektare zomonakalo wezityalo ze-dicamba waxelwa kunyaka ophelileyo kwi-18 ithi, inkundla iqaphele.
NgoFebruwari, ijaji evumayo yanika umfama wase-Missouri ipesika $ 15 yezigidi kumonakalo ohlawulelwayo kunye ne-250 yezigidi zeedola kumonakalo ozohlawulwa yiBayer kunye ne-BASF ngomonakalo we-dicamba kwipropathi yakhe.
Kwingxelo ekhutshwe emva kwesibhengezo se-EPA, i-BASF ithe iyasixhasa isigqibo se-EPA sokuvumela ukusetyenziswa okuqhubekekayo kwezitokhwe ezikhoyo ze-BASF's Engenia herbicide nge-31 kaJulayi, kodwa yathi "ukucaca okongeziweyo kunye nokuguquguquka" kuyafuneka. Inkampani ithi ikurhoxisile kwangoko ukuthengisa kunye nokuthumela i-Engenia herbicide emva kwesigqibo seveki ephelileyo.
Inkampani ithe izakuqhubeka nokulandela ukubhaliswa kwakhona kwe-Engenia kwi-EPA kwaye ivavanya iindlela zayo zokulandela izilungiso zomthetho zokucela umngeni kwinkundla.
Pesticides ulimo, I-BASF, Bayer, Corteva, inkundla, Dicamba, Engenia, indawo, EPA, zolimo, Fexapan, ukutya, impilo, herbicides, ityala, Ukumangalelana. umthetho, IMonsanto, inzululwazi, ukubulala ukhula, ukhula, Xtend